သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်ကြေးဝါအနားကွပ်ဂိတ်အဆို့ရှင်၊ မြင့်မားသောဖိအားရေဂိတ်အဆို့ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်ပါ
ဖေါ်ပြချက်:ကြေးဝါဂိတ် Valve, အနားကွပ်ဂိတ်အဆို့ရှင်, မြင့်မားသောဖိအား Gate ကိုအဆို့ရှင်, ရေတံခါးအဆို့ရှင်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အဆို့ရှင် > ဂိတ်အဆို့ရှင်
ဂိတ်အဆို့ရှင် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ကြေးဝါဂိတ် Valve, အနားကွပ်ဂိတ်အဆို့ရှင် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မြင့်မားသောဖိအား Gate ကိုအဆို့ရှင် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ကြေးဝါကြေးဝါတံခါးကိုအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
F * F ကြေးဝါဂိတ်အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Forge Gate အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Gate အဆို့ရှင် FORGING  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင်များကိုပြုပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Forge ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ယူနီယံ NUT နဲ့ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် FORGE  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သဲပိုလီနှင့်အတူ FORGE ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
M က * M ကို FORGE ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါနှင့်အတူကြေးဝါတံခါးဝအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါတံခါးဝအဆို့ရှင်ဖောက်လုပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင်အောင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါတံခါး Valve  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဂဟေဆော်နှင့်အတူကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပိုက် Union နှင့်အတူကြေးဝါတံခါးတံခါးအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပဲ့ကိုင်တွယ်နှင့်အတူဂိတ် Valve  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖြောင့် - မှတဆင့်သောကြေးဝါတံခါးတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Antirust ဆေးသုတ်ခြင်းဖြင့်တံခါးပေါက်အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
1/2 မှ4အထိအရွယ်အစား ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အင်္ဂါရပ်များ: သဲဆေးနှင့်အတူ 1.Forge ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 16 bar ကိုကနေ 25 ဘားမှ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား။ 3. Thread အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီး NPT ချည်အဆုံးသတ်ထားသည် 4. WOG (water.oil.gas) 5. Stuffing box ကို PTFE ။ ၆၀ ဒီဂရီမှ...
အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ ၃ အထိ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား: 16 ဘားမှ 25 ဘားရန် 3. Thread အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီး NPT ချည်အဆုံးသတ်ထားသည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ ၆၀ ဒီဂရီမှ ၁၁၀...
အရွယ်အစား - ၁ / ၂'-၁၁ / ၂ 'မှ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား: 16 bar ကိုမှ 25 bar ကို ၃။ အပူချိန်အလုပ်လုပ်မှု - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 4. Thread အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီး NPT ချည်အဆုံးသတ်ထားသည် 5....
အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ ၂ အထိသို့ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်နေသော tempereture: -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ -20 ဒီဂရီ အလုပ်လုပ်ဖိအား: 16 ဘား -25 ဘား WOG...
ယူနီယံ NUT နဲ့ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် FORGE
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် အနုပညာ KS 3280 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 15mm 22mm အင်္ဂါရပ်များ: သဲဆေးနှင့်အတူ 1.Forge ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား 16 bar, Max.working ဖိအား 25bar ။ 3. ချုံ့အဆုံးသတ်ပြည်ထောင်စုအဆုံးသတ်ထားသည် 4. Stuffing box:...
သဲပိုလီနှင့်အတူ FORGE ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင်
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် အနုပညာ ကျပ် ၃၃၀၀ ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ2", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2",21/2 ", 3",4" အင်္ဂါရပ်များ: သဲဆေးနှင့်အတူ 1.Forge ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2....
M က * M ကို FORGE ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင်
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် အနုပညာ ကျပ် ၃၀၄၀ ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် M / M အရွယ်အစား: 1 " အင်္ဂါရပ်များ: သဲဆေးနှင့်အတူ 1.Forge ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား 16 bar, Max.working ဖိအား 25bar ။ 3. Thread အထီး - အထီး NPT ချည်အဆုံးသတ်ထားသည် 4. Stuffing...
အရွယ်အစား: From1 / 2'-4 ' အင်္ဂါရပ်များ: သဲဆေးနှင့်အတူ 1.Forge ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 16bar ကနေ 25 ဘားမှ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား 3. Thread အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီး NPT ချည်အဆုံးသတ်ထားသည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် အနုပညာ ကျပ် ၃၁၁၀ ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ2", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2",21/2 ", 3",4" အင်္ဂါရပ်များ: သဲဆေးနှင့်အတူ 1.Forge ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2....
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် အနုပညာ KS 327A ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ2", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2",21/2 ", 3",4" အင်္ဂါရပ်များ: သဲဆေးနှင့်အတူ 1.Forge ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် အနုပညာ ကျပ် ၃၂၀၀ ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ2", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2",21/2 ", 3",4" အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား 16 bar,...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် အနုပညာ KS 305A ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ2", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2",21/2 ", 3",4" အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား 16 bar,...
ပိုက် Union နှင့်အတူကြေးဝါတံခါးတံခါးအဆို့ရှင်
အမှတ်တံဆိပ်: JJD, Kingsir
ပိုက် Union နှင့်အတူကြေးဝါတံခါးတံခါးအဆို့ရှင် KS-3280 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် ပိုက်နှင့် ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား: 1/2,3 /4~4လက်မ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် /...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် KS-327A ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ ၂.၃ / ၄ ~ ၄ " အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ ၃။ NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B သို့ ၁.၂.၁ အဆုံးသတ်သည် 4....
ပိုက် Union နှင့်အတူကြေးဝါတံခါးတံခါးအဆို့ရှင် Art.8026 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် ပိုက်နှင့် ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား: 1/2, ~2" အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် /...
ဖြောင့် - မှတဆင့်သောကြေးဝါတံခါးတံခါး Art.8025 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ 2,3 / 4,1 ~4" အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ ၃။ NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B သို့ ၁.၂.၁...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8024 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ ၂.၃ / ၄ ~ ၂ " အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ ၃။ NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B သို့ ၁.၂.၁ အဆုံးသတ်သည် 4....
တရုတ်နိုင်ငံ ဂိတ်အဆို့ရှင် ပေးသွင်း
Gate valves များကို full-flow valves များဟုခေါ်သည်။ အဆို့ရှင်၏အလယ်ကို ဖြတ်၍ စီးဆင်းမှုအတွက်အတားအဆီးမရှိသောလမ်းကြောင်းရှိသည်။ အဆို့ရှင်ပုံစံကြေးဝါဂိတ်တစ်ခုကိုအဆို့ရှင်ကိုပိတ်ရန်စက်ထဲသို့လျှော့ချသည်။ သူတို့ကလုံးဝပွင့်လင်းသို့မဟုတ်လုံးဝပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပွင့်လင်း တံခါးအဆို့ရှင် မှတဆင့်စီးသောရေသည်သတ္တုကိုပျက်စီးစေပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအဆို့ရှင်အားကျဆင်းစေသည်။
ကြေးဝါဂိတ် Valve အနားကွပ်ဂိတ်အဆို့ရှင် မြင့်မားသောဖိအား Gate ကိုအဆို့ရှင် ရေတံခါးအဆို့ရှင် ကြေးဝါရေပန်း Valve